ကိုယ့်ရဲ့ ဘလော့မှာ eot ထည့်ချင်သူများအတွက်
ကိုယ့်ရဲ့ ဘလော့ (blogspot.com ဘလော့များသာ) မှာ eot ထည့်ချင်သူများ ခင်ဗျား....
blog template ပြင်တဲ့အထဲက HTML ထဲဝင်ပြီး style type="text/css" ကိုရှာ၊ တွေ့ပြီး ဆိုအဲဒီ စာကြောင်းရဲ့ အောက်မှာ ဖော်ပြပါ စာကြောင်း ၆-ကြောင်းကို ထည့်လိုက်ရင်ရပါပြီ ခင်ဗျား...
Bold, Italic တို့အတွက် တော့မပါပါ... ရိုးရိုး normal Zawgyi-One အတွက်ပါ... စမ်းကြည့်ပါဦး...
ကျတော်တောင် ကျတော့် blog က eot ကို ဖြုတ်တော့မလို့... ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ blog လာကြည့်သူ တော်တော်များများမှာ Zawgyi-One သုံးနေကြပြီလေ...
eot မဖြုတ်ပါနဲ့ဦးခင်ျော ... ။
ဘလော့မရေးတဲ့ နိုင်ငံတကာက မြန်မာ စာဖတ်သူသက်သက်တွေအတွက် eot ဟာတစ်ကယ့်ကို လိုအပ်ပါတယ် ။
အကြောင်းကိစ္စ ထွေထွေထူးထူးမရှိရင်တော့ ဒီအတိုင်းလေး ဆက်ထားစေချင်ပါတယ် ...။
( ကျွန်တော့်အမြင်လေးပါ ခင်ျော။ )
Big Brother Thu said…
I want to use sayar's eot .
thanks u for writing about how to makeablog book.
i'm very thanked to u.
ဒါဆိုရင် EOT အတွက် WEFT ကို Run ပြီး Address URL ထည့်ပေးစရာတောင် မလိုတော့ဘူးပေါ့.
ဒီနည်းက အရမ်းအဆင်ပြေတာပဲဗျ. ကိုမောင်လှကြီးကို ချီးကျူးပါတယ်ဗျာ.
ကိုမောင်လှရဲ့ ဘလော့ဂ်က EOT တော့ မဖြုတ်စေချင်သေးဘူးဗျ. ဘာလို့လဲဆိုတော့ နိုင်ငံတကာက စာဖတ်သူတွေအတွက် အကျိုးများစေလို့ပါ. တစ်ချို့ဆို ရုံးက ကွန်ပြူတာကို အလစ်ခိုးသုံးပြီး ဘလော့ဂ်ဖတ်တာရှိသေးတယ်လေ. (တိုက်ဆိုင်က ခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျာ.)
ဒါကြောင့် သူတို့လေးတွေအတွက် ဒီတိုင်းလေးပဲ ထားပေးလိုက်ပါဦးလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ…
အစ်ကိုတို့လိုဘလော့ဂါတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေ လူတစ်လုံးသူတစ်လုံး ဖြစ်လာတာဗျ.
မန်းလေးရောက်ရင် ပလာတာကျွေးပြီး ဘီယာတိုက်မယ်.
MYO HAN HTUN said…
ကိုမောင်လှ .. ရေ ..
eot ကတော့ ထားလိုက်ပါ။ NetCafe တွေပြောင်းသုံးတတ်တဲ့ မြန်မာတွေ အများကြီးပဲ။ သူတို့အတွက်တော့ ထားပေးသင့်ပါတယ်။
ကိုမောင်လှ၊ အကို့ရဲ့ အီးအိုတီကို ကျနော်တို့ ယူသုံးထားတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု blogspot.com ကို ဘန်းထားတော့ ကျနော်တို့ ဒိုးမိန်းပြောင်းပြီး myanmarbloggers.org ကို သုံးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အီးအိုတီက အလုပ်မဖြစ်တော့ပါ။ အဲဒါ ဘယ်လို လုပ်လို့ ရမလဲ ဆိုတာ သိချင်လို့ အကြံဉာဏ် လှမ်းတောင်းရတာပါ အကို။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။